April 2018 - Puntland Mirror Believable Media Website
April 30, 2018 Puntland Mirror 0
Beledweyne-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Isniin ah tagay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan, sida ay sheegeen masuuliyiinta dowladda. Ujeedka safarka Madaxweynaha ee Beledweyne ayaa ah sidii uu arki […]
Garoowe-(Puntland Mirror) In ka badan 100 askari oo Somaliland katirsan ayaa isku soo dhiibay Puntland, taleefishinka dowladda ee PL TV ayaa ku waramay fiidnimadii Axada. Ciidanka isa soo dhiibay ayaa waxaa deegaanka Har-wanaag ee gobolka […]
Garowe-(Puntland Mirror) More than 100 Somaliland soldiers have surrendered to Puntland, state-owned PL TV reported on Sunday evening. The surrenders were welcomed by the Puntland army commanders and Nugal governor Omar Abdullahi Faroweyne in Har-wanag […]
April 29, 2018 Puntland Mirror 0
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somali Finance Minister said Somali shilling notes will soon be published. “To print the banknotes the cost of printing would be $41 million,” Abdirahman Duale Beyle said in a press conference in Mogadishu […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirka Maaliyada Soomaaliya ayaa sheegay in dhawaan si dhaqso ah loo daabici doono lacag shillin Soomaali ah. Shir saxaafadeed maanta oo Axad ah uu ku qabtay magaalada Muqdisho, Cabdirixmaan Ducaale Beyle ayaa shegay […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa bisha soo socota martigelin doonta shir caalami ah oo labo maalmood socon doona oo ujeedkiisu yahay joojinta ganacsiga dhuxushada sharci darada ah ee Soomaaliya, sida ay sheegeen qabanqaabiyaashu Sabtidii. Shirka ayaa […]
Somalia will next month host a two-day international conference aimed at stopping illegal charcoal trade in the Horn of Africa nation, organizers said Saturday. The May 7-8 conference, which will bring together Somali environment experts […]
April 28, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka codsaday haayadaha samafalka in ay gargaar la gaaraan dadka ay wax yeeleeyeen fatahaadaha wabiyada Jubba iyo Shabeelle. Shir looga hadlayay xaalada fatahaadaha oo ka dhacay Muqdisho […]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Qof isa soo miidaamiyay ayaa isku qarxiyay xarun ciidan oo kutaala magaalada Gaalkacyo maanta oo Sabti ah, waxaana uu dilay afar askari, sida ay sheegeen masuuliyiin. Dadka dhintay ayaa waxaa kamid ahaa sargaal […]
A suicide bomber blew himself up in a military camp in the Somali town of Galkayo on Saturday, killing four officers, officials said, an attack claimed by the al Qaeda-linked al Shabaab group. The dead […]
Dubai-(Puntland Mirror) Wasiirkii Arrimaha Dastuurka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa maanta oo Jimce ah ku geeriyooday isbitaal kuyaala magaalada Dubai ee dalka Imaaraatka Carabta, sida ay xaqiijiyeen xubno katirsan qoyskiisa. Wasiirka ayaa [...]